2 nin oo lagu tuhmayo boobkii dukaamada Somalida ee K/Afrika oo ay qabteen… – SBC
2 nin oo lagu tuhmayo boobkii dukaamada Somalida ee K/Afrika oo ay qabteen…
Labo qof oo lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen boobkii dukaamo ganacsato Soomaaliyeed loogu geystay isbuucan magaalada Port Elizabeth ee dalka koonfur Africa ayaa waxaa gacanta ku soo dhigay ciidamada amaanka dalkaasi oo maalmihii ugu dambeeyay baritaano arintan la xiriiro waday.
Ciidamada amaanka ayaa sidoo kale sheegay in ay wali baacsanayaan qowleysato kale oo ay ku daba jiraan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen, isla markaana ay cadaalada horkeeni doonaan.
Qabashada labadan nin ayaa timid ka dib markii ay ciidamada sida gaarka u taba-baran ee ka hortago xasaradaha ay maalmihi ugu dambeeyay baaritaano ka wadeen deegaanka Motherwell kuwaasoo ay ku baacsanayeen dadkii ka dambeeyay dhibaatadii lagula kacay Soomaalida todobaadkan.
Booliska magaalada Port Elizabeth ayaa carabka ku dhuftay in ay maxkamad horkeeni doonaan dadkii ka dambeeyay dhibaatooyinkii lagula kacay isbuucan shacaka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Koonfur Afrikaica sida uu saxaafada u sheegay madaxa booliska Captain Andre Beetge .
Si kastaba ha’ahaatee isbuucan gudihiisa ayaa la boobay ugu yaraan 50-dukaan oo ay soomaali leedahay halka afar kalane dab la qabsiiyay magaalada Port Elizabeth ee dalka koonfur Africa.
Halkan ka akhri warbixintii hore ee ay SBC ka qortey xaaladan
sbc cape town-koonfur afrika.